Fitantanana isam-paritra :: Hotendrena tsy ho ela ny ampahany amin’ireo governora • AoRaha
Fitantanana isam-paritra Hotendrena tsy ho ela ny ampahany amin’ireo governora
Raha tsy misy ny fiovana dia amin’ny herinandro ambony, mandritra ny Filankevitry ny minisitra no hiroso amin’ny fanendrena an’ireo governora hitantana an’ireo faritra roa amby roapolo eto Madagasikara ny Filohan’ny Repoblika, Rajoelina Andry.
Voalaza fa efa natomboka tamin’ny herinandro lasa teo ny fifantenana azy ireo, saingy mbola tsy vita izany hatramin’izao. Ireto governora ireto no hisolo toerana vonjimaika an’ireo lehiben’ny faritra.
Notsipihin’ny minisitry ny Serasera sy ny kolontsaina, Rakotondrazafy Lalatiana, omaly, fa ny anarana fotsiny no miova fa mitovy ny andraikitra sy ny asa sahanin’ireo governora ireo. Toy izany koa ny fahefana ananany. “Izy ireo izany no hitantana ny faritra aloha mba tsy hisian’ny sakana eo amin’ny fiantsorohana an’ireo asa tanterahana eny anivon’ny faritra”, hoy ny mpitondra tenin’ny governemanta.
Voalaza kosa fa mety mbola hisy ny firosoana amin’ny fifidianana an’ireo governora hitantana ny faritra eto amintsika, aorian’ny fahalanian’ireo ben’ny tanàna miisa dimy amby sivifolo sy eninjto sy arivo. Aorian’izay vao mety hisy ny fikitihana ny lalàna tokony hifehy ny fametrahana amin’ny fomba ofisialy an’ireo governora eo amin’ny toerany.